श्रावण २७, २०७४ पूर्ण विके
बागलुङ — अविरल वर्षाले घरको भित्तो भत्किँदा शुक्रबार बिहान गलकोट ९ बडागाउँमा दुई जनाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको छ । पहिरोमा १३ वर्षीय नाति विवेक विक र ७५ वर्षीय हजुरबा जयलालको पुरिएर मृत्यु भएको ईलाका प्रहरी कार्यालय हरिचौरले जनाएको छ ।
प्रकाशित : श्रावण २७, २०७४ १२:२१
दंग साम्राज्ञी र सलिनमान
श्रावण २७, २०७४ सुशील पौडेल
‘ड्रिम्स’ डेब्यू नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले पहिलो फिल्मबाटै यतिधेरै विश्वास जितिन् की दोस्रो फिल्म ‘ए मेरो हजुर २’ रिलिज नहुँदै पाचौं फिल्म खेलिसकेकी छन् । ‘मंगलम’ मा सानो भुमिकामा देखिएकी साम्राज्ञी यतिबेला ‘इन्टु मिन्टु लन्डनमा’ को सुटिंगमा छिन् ।
‘तिमीसँगै’ को भने सुटिंग सकाएकी छन् । भदौ १६ देखि प्रदर्शनमा आउन लागेको ‘ए मेरो हजुर २’ लाई लिएर उनी यतिबेला उत्साहित छिन् । ‘ड्रिम्स’ पछि उनलाई एकैनासका स्क्रिप्ट लिएर मात्रै अफर आए ।
न आफ्नो चरित्रमा खास फरक भेटाईन् । एउटा कलाकारलाई सधैं एउटै चरित्र मात्रै गर्ने मन हुँदैन । ‘अलि भिन्न गर्नमा रमाइलो लाग्छ’ भिन्न खोजिरहेकी साम्राज्ञीले ‘ए मेरो हजुर २’ खेल्न किन राजी भईन् त ? भन्छिन्, ‘एउटै खाले स्टोरी र क्यारेक्टर मात्रै आईरहेका बेला बल्ल बल्ल डिफरेन्ट स्टोरी लाइन भएको यो फिल्म पाएँ ।’ फिल्ममा मायाको चरित्र निर्वाह गरेकी साम्राज्ञीले समाजका आम सोचाईका युवती भन्दा भिन्दै, केही नराम्रो देख्दा सहेर बस्न नचाहने हक्की भुमिकाले तानेको बताईन् ।
‘हाम्रो समाजमा केटालाई भन्दा केटीलाई अलि बढि नै पारिवारिक दबाब हुन्छ । केटी भनेको खाली राम्री हुनुपर्‍यो र घर सम्हाल्न सक्ने हुनुपर्‍यो भन्ने मान्यता छ । तर फिल्ममा मेरो चरित्रले केटी मान्छे पनि पढेर आत्मनिर्भर हुनसक्छ, धेरै गर्न सक्छ भनिएको छ’ उनी चरित्रबारे यसभन्दा बढि खुलिनन् । साम्राज्ञी नेपाली फिल्मकी उतिसारो जानकार हैनन् । बच्चैदेखि भारतमा बसेर पढेकी उनले मुश्किलले फिल्म हेर्न पाउथिन् । त्यसमा उनको पहिलो रोजाई हिन्दी र अंग्रेजी फिल्म नै हुन्थे रे ।
होस्टेल बसेर पढेकी साम्राज्ञीले भनिन्, ‘होस्टेलमा पनि सातामा एक दिन टीभी हेर्न पाईन्थ्यो । टीभीमा दूरदर्शन च्यानल मात्रै आउने । त्यही मात्रै हेरिन्थ्यो । फिल्मबारे खासै थाहा थिएन ।’ घरमा भने उनलाई मामुले नाम नै टीभीको किरा राखिदिनु भएको रहेछ । छुट्टिमा घर जाँदा बिहानदेखि बेलुकासम्मको उनको काम टीभी हेर्ने मात्रै हुन्थ्यो । ‘ए मेरो हजुर’ साम्राज्ञीलाई मामुले नै हेराउनु भएको रहेछ । झरना थापा र श्रीकृष्ण श्रेष्ठ अभिनित ‘ए मेरो हजुर’ उनले ‘ए मेरो हजुर २’ साइन गर्नुअघि हेरेकी थिइनन् रे ।
दुवै फिल्मको समानता झरना र ब्यानर बाहेक कथामा त्यस्तो छैन । पहिलो फिल्मकी नायिका झरना दोस्रो फिल्मबाट डेब्यू निर्देशक बन्दैछिन् । ‘त्यो समयमा ‘ए मेरो हजुर’ को लभस्टोरी बबाल होला तर अहिले हेर्दा मलाई अलि स्लो लाग्यो । झरना दिदी र श्रीकृष्ण दाईबीचको केमेस्ट्री चाहीं एकदमै मनपर्‍यो । झरना दिदीको लजाएर हेर्ने, मायाले बोल्ने जस्तो कुरा मैले यसमा गर्न सक्छु की सक्दिनँ होला भन्ने डर चाहीं लाग्यो ।’ फिल्ममा नायिकापछि मात्रै नायकको कास्टिंग भयो ।
सलिनमान बाँनियाले ब्रेक पाए । साम्राज्ञी र सलिनबीच राम्ररी चिनजान भएको फिल्मको वर्कशपदेखि हो । पछि सुटिंगमा पनि साम्राज्ञीले धेरै सहयोग गरेको सलिन बताउँछन् । ‘एकदमै हेल्पफूल, फ्रेन्ड्ली पाएँ । कुनैबेला एक्टिंग गर्न गाह्रो भईरहँदा उसले सिकाईदिई रहेको हुन्थ्यो’ लजालु स्वभावका सलिनको कुरा नसकिंदै साम्राज्ञीले थपिन्, ‘कुनैकुनै ठाउँमा उसले गरेको प्रयास पुग्थेन । अनि म उसलाई बुझाउँथे, एक्टिंग भनेको संवाद बोल्ने मात्र हैन । तिम्रो हाउभाउ, रियाक्सनमा पनि ध्यान दिएर गर्‍यौ भने एकदम राम्रो देख्छ भनेर सम्झाउथें ।’
डेब्यू फिल्म र त्यसमा पनि लजालु स्वभावका कारण सलिनलाई लभ मेकिंग सिनमा अभिनय गर्न बढि गाह्रो भएछ । यसले को–एक्टर साम्राज्ञीलाई झनै अप्ठ्यारो परेछ । ‘लभ मेकिंगमा मैले मात्रै इफोर्ट लगाउँदा स्क्रिनमा एकदमै नराम्रो देखिन्थ्यो । भल्गर लाग्थ्यो’ साम्राज्ञीले चलाखी गरेर सलिनलाई पनि यसरी गरौं भनेर उक्साउँथिन् । दुवैले गर्दा त्यो राम्रो देखियो पनि । फिल्मको ट्रेलरमा मायाले एक संवाद बोल्छे, दश कक्षासम्म आईपुग्दा तीन–तीन ब्वायफ्रेन्ड फेरिसकेको भनेर ।
साम्राज्ञी उक्त चरित्र प्ले गर्ल खालको नभई अवस्थाले नै त्यस्तो बोल्नुपरेको सुनाउँछिन् । ‘केटा पछि लागेकोले दिक्क भएर नआओस् भनेर हर्ट गर्न त्यसो भनेकी हुन्छे’ त्यसो त कत्तिले त्यही डायलग सुनेर वास्तविकतामा पनि त्यस्तो भएको थियो भनेर सोध्दा रहेछन् । ‘तर रियल लाइफमा त म कस्तो छु भनेर मेरो साथीहरुलाई पनि थाहा छ’ झन्डै टम ब्वाय स्वभावकी साम्राज्ञी होस्टेलमा एक्लै काफी थिइन् रे । भन्छिन्, ‘त्यतिबेला होस्टेलमा मेरो केटा–केटी सबैसँग झगडा परिरहन्थ्यो । ब्वाइफ्रेन्ड, गर्लफ्रेन्ड बनाउने भन्ने नै हुन्थेन ।’
साम्राज्ञीलाई अरुको कमान्डमा खुम्चिएर बस्न मन नपर्ने रहेछ । स्कुलमा सलिनको पनि कसैसँग प्रेम बसेन रे । किन त ? ‘म नराम्रो थिएँ । कोही केटीले हेर्दापनि हेर्दैनथे’ तर यिनै सलिनको यतिबेला भने फिल्म रिलिज अगावै फ्यान फलोइङ बढ्दो छ । भन्छन्, ‘पछि हेयरस्टाइल चेन्ज गरें । चश्मा लगाउँथे, लेन्स लगाउन थालें । एक्सरसाइज गर्न थालें । त्योबेलाका साथीले अहिले हेर्दा सुरुमा नचिनेको कुरा गर्छन् ।’ त्यसो त साम्राज्ञीले नै उनको लाइसेन्सको फोटो हेरेर चिनिन् रे । ‘अहिले उसले आफुलाई धेरै चेन्ज गरेको रहेछ । राम्रो बनाएको रहेछ’ नायिकाले भनिन् ।
शुरुमा देख्दै साम्राज्ञीलाई गुड लुकिंग लागेको रहेछ । उनकै मामुले समेत ‘हिरो त क्युट रहेछ नी’ भन्नु भएको याद छ । साम्राज्ञीले ‘ए मेरो हजुर २’ आफ्ना लागि कम्प्लिट हिरोइन प्याकेज भन्न रुचाउँछिन् । रोनाधोना, हँसिमजाकदेखि एक्सनसम्म सबै भएकोले पनि उनलाई यस्तो लागेको हो । डेब्यू फिल्ममा डान्स गर्न नपाएकी उनले यसपटक मज्जैले देखाउन पाईन् । तर त्यही नृत्यका लागि संसारकै अग्लो स्थानमा रहेको तिलिचो ताल पुग्दा भने उनी आत्तिइन् ।
‘त्यस्तो भीरैभीरको साँघुरो बाटो जानुपर्छ भन्ने पहिल्यै थाहा पाएको भए सायद मैले यो फिल्म नै खेल्थिनँ होला’ त्यसअघि तिलिचोको नाम समेत नसुनेकी तिनै साम्राज्ञी त्यहाँ पुगेपछि भने दंग परिन् । ‘दु:ख गरे अनुसार ठाउँ यत्ति दामी रहेछ भन्ने भयो । त्यहीं खिचेको शीर्ष गीत हिट भएपछि त झनै मख्ख परिन् । ‘त्यहाँको चिसो केवल चिसो मात्रै थिएन, पोल्ने खालको थियो । पुरा शरिर सुन्निरहेको थियो । राम्रोसँग याद गर्नुभयो भने गीतमा मेरो गाला फुलेको देख्नुहुन्छ’ उनले भनिन् ।
को–एक्टर बाक्लो लुगामा देख्दा झन्डै माइनस १० डिग्री सेन्टिग्रेटको चिसोमा पनि खुल्ला पहिरनमा सट दिई रहेकी नायिकालाई पक्कै रीस उठ्यो होला ? ‘अहँ । किनकी मलाई मेरो लुगा पनि मन परिरहेको थियो । अनि मलाई थाहा थियो क्यामेरामा के राम्रो देख्छ भनेर,’ व्यवसायिक दिमागकी साम्राज्ञीले थपिन्, ‘केही छैन अहिलेको लागि मात्रै त गाह्रो हो भनेर मन बुझाएँ ।’ बरु अनकन्टार ठाऊ, चिसो अनि समयमा ब्रेकफास्ट खान नपाई सुटिंग गर्नुपर्दा सलिन भने रीसले चूर थिए रे ।
साम्राज्ञीले नै पोल खोल्दै भनिन्, ‘रीस त मलाई पनि उठिरहेको थियो । तर मैले देखाइन । बरु उसलाई मज्जाले सम्झाउने परेको थियो । हेर पछि गएर स्क्रिनमा हेर्दा त्यतिबेला मैले किन गरिनँ भनेर पछि आफैंसँग रीस उठ्छ । त्यसैले अहिलेको लागि हैन, पछिको लागि भए पनि गरौं ल भनेर सम्झाउनुपर्‍यो ।’ पछि भने इडिटिंगमा गएर फुटेज हेर्दा साम्राज्ञी त एकछिन हराइन् नै रे । ‘फेरि हेरौं न भन्दै कत्तिचोटी हेर्‍यौं । कस्तो राम्रो लाग्यो, साम्राज्ञीले कुराकानीको अन्त्यमा भनिन् ।